"Lix Gool Ayaa La Naga Dhaliyey 3dii Ciyaarood Ee U Dambeeyey, Taasina Maaha ..." Timo Werner Oo Digniin U Diray Difaacyahannada Chelsea - Gool24.Net
“Lix Gool Ayaa La Naga Dhaliyey 3dii Ciyaarood Ee U Dambeeyey, Taasina Maaha …” Timo Werner Oo Digniin U Diray Difaacyahannada Chelsea
Weeraryahanka Timo Werner ayaa digniin u diray ciyaartoyda difaaca uga ciyaarta kooxdiisa Chelsea kaddib goolashii waqtiga dambe ay ka dhalisay Southampton oo ay ku kala baxeen 3-3.
Chelsea ayaa ciyaarta ku hoggaaminaysay laba gool iyo waxba 30kii daqiiqadood ee ugu horreeyey, waxaana labadaba u dhaliyey Timo Werner oo bandhig cajiib ahaa muujiyey, laakiin Southampton ayaa labada goolba ka daba keentay oo ka dhigtay 2-2.
Kai Havertz ayaa gool saddexaad u dhaliyey Chelsea oo mar kale hoggaanka u dhiibay balse dhamaadkii ciyaarta ayuu musalsalku soo gabogaboobay oo guushana loo diiday Chelsea markaas oo uu goolka barbarraha Southampton u dhaliyey laacibkooda Jannik Vestergaard.
Goolka uu dhaliyey Che Adams waxa qalad weyn sameeyey Kurt Zouma iyo goolhaye Kepa Arrizabalaga, waxaana uu difaaca reer France kubbad gaabis ah dib ugu celiyey goolhayaha reer Spain oo isagana kubadda oo uu qaban karayay ay ka hoos baxday.
Timo Werner oo warbaahinta la hadlay ayaa ciyaartoyda difaaca kooxdiisa waxa uu xasuusiyey in saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey laga dhaliyey lix gool, taasina aanay ahayn wixii laga sugayay Blues inay la shir timaaddo.
Ugu horreyn waxa uu sharraxay qaab ciyaareedkii kooxdiisa ee qaybtii hore, waxaanu yidhi: “Qaybtii hore si fiican ayaanu u ciyaarnay illaa laga gaadhayay goolkii koowaad ee Southampton. Marka aad hesho gool lkaba ama saddex daqiiqadood ka hor dhamaadka qaybta hore, mar walba ma fududa sababtoo ah, waa inaad aragti caddaan ah ka leedahay qaybta labaad sababtoo ah labada gool waxa ka wanaagsan halka gool.
“Qaybta labaad, Southampton ayaa na saartay cadaadis badan, si sarraysa ayaanay noo riixeen. Waxay ila tahay in aanu siinay fursado badan oo ay goolal ku dhaliyaan. Waxaanay ahayd inaanu ku guuleysano ciyaartan.
“Waan ku faraxsanahay goolashayda laakiin dhamaadkii maanaan guuleysan. Waa maalin aan faraxsanahay boqolkiiba konton oo aanan faraxsanayn boqolkiiba koonton.”
Intaa kaddib waxa uu digniin u diray difaaca Chelsea, waxaanu yidhi: “Ma ogi haddii ay dhibaato naga haysato difaaca, laakiin saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey waxa la naga dhaliyey lix gool, taasina maaha halkii lanaga doonayay inaanu joogno.”
Timo Werner waxa uu xusay in si kasta oo ay hadda yihiin, ay haddana Chelsea u dagaallami doonto horyaalka, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay inaanu nahay Chelsea, waxaananu doonaynaa inaanu u dagaallano horyaalka.”